dhiri: ipad pro 9.7 32gb iri pasi pe $ 500 pane ebay, verizon modhi inodhura $ 480 nekontrakiti
Kuru Nhau & Ongororo Deal: iPad Pro 9.7 32GB iri pasi pe $ 500 paBay, Verizon modhi inodhura $ 480 nekontrakiti
Deal: iPad Pro 9.7 32GB iri pasi pe $ 500 paBay, Verizon modhi inodhura $ 480 nekontrakiti
Zvigadzirwa zveApple & apos; hazviwanzobatsirika kubva pakubvisa kwakakura mushure megore rimwe chete rekuwanikwa pamusika. Nekudaro, kana iwe usingakwanise & apos; t isingakwanise gore rapfuura iPad Pro 9.7, heino chibvumirano chinokutendera iwe kuti utenge imwe pasina kupaza bhangi.
Zvakanaka, zvirinani kwete hombe bhangi sezvo piritsi ichiri kudhura zvakanyanya. Mumwe eBay mutengesi anotengesa iyo iPad Pro 9.7 32GB Wi-Fi + LTE modhi ye $ 499.99 chete, asi piritsi racho rinowanzo kuwanikwa ne $ 730.
Vatengi vanosarudza kuenda pachibvumirano vachachengetedza $ 230 pavanotenga iyo iPad Pro 9.7, inowanikwa muRose, Rose Goridhe, Sirivheri, uye Space Grey.
Kana iwe uchiri kugona & apos; t tenga kutenga Apple & apos; s iPad Pro 9.7 32GB , ipapo unogona kufunga Best Buy & apos; s yekushambadzira kupihwa. Mutengesi weUS anotengesa iyo imwecheteyo modhi chete $ 479.99, asi uchafanirwa kuzvipira kune chitsva chemakore maviri chibvumirano neVerizon. Padivi rerutivi, iwe & apos; uchange uchichengetedza isingasvike pamadhora mazana maviri kana uchitenga iyo Verizon iPad Pro 9.7 32GB.
Aya madhiri anowanikwa kwenguva yakatarwa kana kusvika pakapihwa zviripo, saka sarudza nekukurumidza kuti unotora kana kwete kushandisa chero chazvo.
dema renje nharembozha pre rejista
tora zvimwe zvisingagumi 5g uw
Kuenzaniswa neGoogle Mubatsiri, Siri akarova zvakanyanya musiyano yazvino
Maitiro ekuridza isina kurasikirwa odhiyo pane yako iPhone kana iPad (FLAC, nezvimwewo)
Maitiro ekupinza yako iTunes mimhanzi raibhurari kune yako Android chishandiso uchishandisa Google Play Music
Samsung Galaxy S5 mini ichave isina mvura maererano neSamsung New Zealand
Unoda kumwe bling? Samsung Gear S2 Classic Rose Goridhe nePlatinamu ichavhura mangwana muUS
HTC Imwe (M8) vs HTC Imwe (M7)
Verizon vs AT & T, T-Mobile uye Sprint kufukidza, kumhanya, vhidhiyo uye izwi rezwi